Teboka vavaka hanoherana ny fanandramana mamono tena | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny fanandramana mamono tena
Teboka vavaka hanoherana ny fanandramana mamono tena
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka hanoherana ny fikasana hamono tena. Tahan'ny famonoan-tena ao Nizeria lasa manaitra indrindra indrindra eo amin'ny ny tanora. Ireo olona heverina fa handray ny akanjon'ny fitarihana tommorow dia fehezin'ny tadin'ny famonoan-tena mihantona. Henontsika ny tranga famonoan-tena saika avy amin'ny fanjakan'ny federasiona rehetra ary mihombo haingana io.
Ahoana no hamotehan'ny famonoan-tena ireo tovolahy sy tovovavy tsy mbola nahatratra ny fahafaha-miasa feno. Misy demonia mifamatotra amin'ny famonoan-tena izay mahatonga azy io hiparitaka be eo amin'ny fiarahamonintsika ankehitriny. Manana adidy amin'ny fikolokoloana isika isam-batan'olona, ​​amin'ny maha fiangonana ary amin'ny maha firenena antsika. Alohan'ny handinihantsika ireo teboka vavaka hanoherana ny fikasana hamono tena dia andao hasongadino haingana ny sasany amin'ireo antony namono tena.
Ny antony famonoan-tena
Ny famoizam-po dia heverina ho antony lehibe famonoan-tena. Toetra ara-psikolojika diso izay misy fiatraikany amin'ny saina sy ny ati-doha miaraka. Rehefa miditra ao amin'ny fiainan'ny olona iray ny fahaketrahana, dia nanidy ny fieritreretana rehetra izany ary nahatonga azy ireo nitokana tamin'ny tontolo ivelany ahafahan'izy ireo mahazo fanampiana.
Fantatry ny devoly fa misy hery ao amin'ny torohevitra sy fanangonana ireo mpirahalahy ka izay no antony hanaovany ny zavatra rehetra hahazoana antoka fa ny olona ketraka manasaraka ny tenany amin'ny tontolo ivelany.
Fahamenatra sy fanalam-baraka
Antony iray hafa mahatonga ny eritreritra ny hamono tena ny sain'ny olona dia noho ny henatra sy latsa. Toy izany ny an'i Jodasy Iskariota. Heniky ny henatra sy fahafaham-baraka izy ary tsy hitany niverina tany amin'i Kristy intsony. Ny hany zavatra noheveriny fa hamonjy azy amin'ny henatra dia ny fahafatesana ary avy eo dia nandroso izy naka ny ainy.
Rehefa lanin'ny henatra sy fahafaham-baraka ny ain'ny lehilahy dia mety hiteraka fikasana hamono tena izany. Ny henatra dia mety hitarika lehilahy ho amin'ny fahaketrahana izay mety hiafara amin'ny famonoan-tena raha tsy mitandrina.
Na dia efa nilaza mialoha aza i Kristy fa hasehon'ny mpianany iray amin'ireo mpanafika izy, dia mbola tsy afaka nibebaka i Jodasy Iskariota noho ny fitiavany vola. Taorian'ny nisamborana an'i Jesosy dia nofoanana tamin'ny fahotana noho ny zavatra nataony i Jodasy Iskariota. Tsy nahatohitra izy fa namono tena.
Toy izany koa, eo amin'ny fiainantsika, indraindray dia lanin'ny fahatsapana ho meloka isika. Mampahatsiaro izany hatrany ny devoly tahaka ny tsy ahazoantsika famelan-keloka velively. Avelan'ny devoly ho hitantsika ny hafaingan'ny fahotantsika ary ataovy tahaka ny nandaozan'Andriamanitra antsika izany. Rehefa mitranga izany dia mety hiteraka fikasana hamono tena izany.
Ahoana ny fomba handresena ny eritreritra ny famonoan-tena
Mangataha fanampiana amin'Andriamanitra
Rehefa tonga aminao ny olana ara-piainana amin'ny fahatezerana feno dia tsy ampy ny hipetraka sy hisaona, fa fotoana tonga lafatra hangataka fanampiana amin'Andriamanitra ity. Ny apôstôly Peter dia heniky ny fahatsapana ho meloka sy henatra taorian'ny nandavany an'i Jesosy intelo alohan'ny nandehanan'ny bosoa. Nitomany mafy izy. Na izany aza, ampy saina ihany koa izy nangataka fanampiana tamin'Andriamanitra.
Tsy mila misaona noho ny famoizana isika, tokony hianatra mangataka fanampiana amin'Andriamanitra rehefa lasa sarotra ny fiainana.
Eny tsara ny mivavaka, tsara koa ny mahita ireo matihanina manana ny orinasany tokana hanampiana ny olona hahita antony hiainana. Ny mpanolotsaina dia mety ho pasiteranao, mpitarika ara-panahy na olon-kafa. Rehefa mihaona amin'ny mpanolotsaina iray ianao dia hanoro hevitra anao amin'ny fomba izay hanampy anao hahita antony hivelomana.
Na dia mivavaka mba hahazo ny fanampian'Andriamanitra aza dia mahita mpanolotsaina ihany koa. Ny fanampiana avy amin'Andriamanitra dia mety ho tonga amin'ny alàlan'ny fotoana iray miaraka amin'ny mpanolo-tsaina.
Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fahasoavana izay nasehonao ahy hahita andro vaovao, asandrato amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
Ry Jesosy Tompoko, tonga hamely ny demonia na fanahy rehetra manery ahy hamono tena aho, nofoanako ny eritreritra ny famonoan-tena ao an-tsaiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, mivavaka aho fa amin'ny herinao, ianao no manampy ahy handresy ireo fanamby rehetra mandrahona ny aiko mety hahatonga ahy hieritreritra hamono tena amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, noho ny rànao sy ny fahafatesanao ary ny fanasitranana anao no ivavahako mba hanafoanana ny fanaintainako sy ny latsa nataoko. Mangataka aho amin'ny famindram-ponao mba hanomezanao ahy ny fahasoavana hijerena mihoatra ny soratro, mivavaka aho mba hatanjaka ny fahasoavana na dia eo aza ny olana sy ny fahoriana amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho fa amin'ny famindram-ponao no hanomezanao ahy fahasoavana hatoky anao na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza. Ny fahasoavana ho an'ny finoako tsy manenona mihitsy. Ny fahasoavana hanome hery sy hihazonana ny finoako ho velona, ​​mangataka aho fa ny famindram-ponao no hamelanao izany amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompoko, tonga nanohitra ny endrika fahaketrahana rehetra aho. Esoriko ny alahelo rehetra, ny fanaintainana sy ny fahafaham-baraka rehetra dia esorina amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko fa tsy famoizam-po, mangataka fifaliana be amin'ny anaran'i Jesosy aho. Raha tokony hanaintaina sy ho afa-baraka aho dia milaza ho avo amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, amin'ny lafiny rehetra, ny devoly te-hamotika ahy amin'ny fahatsapako ho meloka dia foanako amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, omeo ahy ny fahasoavana mba hilentika mandrakariva amin'ny euphoria ny fitiavanao sy ny hatsaram-panahinao amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo, mananatra ny fanahin'ny tsy fahombiazana rehetra aho amin'ny fiainako. Ny soratra masina dia milaza fa toa Azy koa isika. Tsy mba nahomby i Kristy, mananatra ny fanahin'ny tsy fahombiazana amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ray Tompo ô, ny karazan'aretina rehetra izay manohitra ny endrika fitsaboana rehetra, dia manapa-kevitra ny hanasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ny aretina rehetra mampihena ny fahalianana amin'ny fiainana, ny fanaintainana rehetra izay tsy misy antony tokony hiainana bebe kokoa, dia mananatra anao aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
fikasana hamono tena
Previous lahatsoratraFanambarana ara-paminaniana mahery vaika ho an'ny dingana faharoa amin'ny taona
Next lahatsoratraTeboka vavaka hialana amin'ny fandriky ny fahavalo
Bulambo wenga Denis 13 jona 2021 Amin'ny 1:03 hariva
Fanamarihana: Faly loatra aho hiara-hivavaka aminao. Avelao ho ahy ny andriamanitrao. Tiank ianao.
10 Andininy ao amin'ny Baiboly ho famindram-po sy famelan-keloka
Vavaka isan'andro isan'andro ho an'ny fitarihana avy amin'Andriamanitra
50 Vavaky ny famonjena amin'ny fanahy matahotra
Desambra 22, 2018